संचालनमा अायो महतोको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल :: कमल नेपाल :: Setopati
संचालनमा अायो महतोको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल
गैह्र आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोको लगानीमा भैसेपाटीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल ‘नेपाल मेडिसिटी’ संचालनमा आएको छ।
अस्पतालमा ७५० शैय्या राखिनेछ। उक्त अस्पताल पूर्वाधार तथा प्राविधिक हिसावले सम्पन्न छ। गैह्र आवासीय नेपाली संघ स्थापनाको अवसरमा संचालनमा ल्याइएको सो अस्पतालले स्वदेशमै गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्ने महतोले बताए।
उनले भने ‘कुनै पनि नागरिक उपचारका लागि विदेश धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो अस्पताल संचालनमा ल्याइएको हो, १० दिनभित्र थप ७ वटा शल्यक्रिया कक्ष संचालनमा आउने छन्।’ हाल अस्पतालमा दुई शल्यक्रिया कक्ष छन्।
साथै उनले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु बाहिरका कुनै पनि अस्पताल तथा क्लिनिकमा आवद्ध नरहने उल्लेख गरे। हेली एम्बुलेन्सको सेवा समेत अस्पतालले उपलव्ध गराउने छ। स्वास्थ्य पर्यटनको विकासका लागि अस्पतालले मद्दत पुर्याउने महतोको भनाइ छ।
अस्पतालमा एक वर्षभित्रै बोनम्यारो, मृगौला र कलेजो प्रत्यारोपण सुरु हुने बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २६, २०७४, ११:४२:०९
किष्ट मेडिकल र टिचिङको प्रयासमा नाजुक हातको सफल शल्य–उपचार
डा. भट्टराईको नेतृत्वमा अहिलेसम्मकै दुर्लभ ‘ओपन हार्ट सर्जरी’ सफल